Duqa Muqdisho oo Dhagax dhigay goob lagu xakameynayo biyaha roobka - Jowhar Somali news Leader
Home News Duqa Muqdisho oo Dhagax dhigay goob lagu xakameynayo biyaha roobka
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar filish) ayaa maanta dhagax dhigay goob loogu talagalay in laga dhigo Biya-qabad laguna maareyn doono biyaha roobka, taasi oo laga hirgalin doonaa wadada hormarta dugsiga tababarka General kaahiyeiyo inta u dhaxeysa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan.
Dhagax dhigan ayaa waxaa guddoomiyaha gobolka ku wehlinayay guddoomiye ku xigeenka Howlaha Guud Cumar Cali Cabdi ,Guddoomiye ku xigeenka Arrimaha Bulshada Basmo Caamir Jakeeti iyo guddoomiyaha Rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdikariin Maxamuud Gabeyre.
Mashruucaan biyo mareenka ayaa waxaa loo dhisayaa si casri ah,iydoo loo sameynayo tubooyin biyaha geynaya Badda maadaama ay muddooyinka halkaasi ay noqotay goob biyo fariisin ah xilliyada roobka, isla markaana ay tahay marin muhiim u ah bulshada degmada Xamar jajab iyo sidoo kale garoonka Aadan Cade ee Magaalada Muqdisho.
Guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in halkaan laga sameynayo maraag iyo ama biyo qabad taasi oo loo dhisayo mid biyaha u gudbineyso badda waxaana sidoo kale ganac ka geysanayo rugta Ganacsiga Soomaaliyeed.
“Dhawaan waxaan daah-furi doonaan barnaamijka isku tashi ee guud ahaan caasimada laga dhaqan galinayo sida dib-u-dhiska wadooyinka ,Waxbarashada iyo caafimaadka waana barnaamijka kaabaya waxyaabaha aas aasiga u ah bulshada Caasimada ayuu hadalkiisa ku daray guddoomiye (Cumar Filish).
Magaalada Muqdisho ayaa roobab toddobaadyadii la soo dhaafay ka da’ayay ayaa waxaa ay sababeen inay xirmaan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada kadib markii ay biyo fariisteen.